Ingiriiska oo Digniin u jeediyey Dawladda Ethiopia - Somaliland Post
Home News Ingiriiska oo Digniin u jeediyey Dawladda Ethiopia
Ingiriiska oo Digniin u jeediyey Dawladda Ethiopia
London (SLpost)- Dawladda Ingiriiska, ayaa Itoobiya kala hadashay isla markaana u jeediysay inay dignoonaan dheeri ka yeeshaan faro-gelin lagu sameeyo xoriyadda iyo bad-baada nolosha hoggaamiyaha mucaaradka ugu tunka weyn Itoobiya oo dhawaan loo gacan-geliyey dalkaas, ka dib markii laga mastaafuriyey dalka Yemen.
Xoghayaha Gargaarka Caalamiga ee Ingiriiska Lynne Featherstone, ayaa xaqiijisay in xukuumadda Itoobiya loo soo gacan-geliyey guddoomiyahii mucaaradka Itoobiya, Andargachew Tsege oo haysata dhalasha dalka Ingiriiska, balse waxa uu ugu baaqay inay inaan lagu fulin xukun dil ah sannadkii hore lagu riday isaga oo dalka dibaddiisa ku maqan.
Xukuumada Ingiriiska waxa ay sheegtay in Mr. Tsege oo haysta dhalashada dalkooda sifo sharci-daro ah lagaga mustaafuriyey dalka Yemen oo looga gudbiyey Itoobiya.
“Waanu kala hadalay xukuumada Itoobiya, walaaca aanu ka qabno muwaadinka Ingiriiska Andargachew Tsege, ee sharci-darada looga soo mustaafuriyey dalka Yemen. Waxaan u sheegnay in loo ogolaado la kulanka, isla markaana naloo ballanqaado inaan xukunkii dilka lagu fulin,” sidaa waxa lagu sheegay qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha dibedda Ingiriiska.